I-bamboo njengesixhobo sale mifanekiso eqingqiweyo yezinambuzane Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imifanekiso eqingqiweyo yezinambuzane ezenziwe ngoqalo
Ubumnandi obunganikwa yitalente, njengoko kusenzeka kwihlabathi loopopayi baseJapan, kwaye ubulumko malunga nobuchule bendlela ethile yobugcisa, unokunika imbonakalo entle yeentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo ezihlala kulo mhlaba.
Umzobi waseJapan UNoriyuki Saitoh udlala ngobo bumnandi ukuze ngesandla sakhe asikhokelele kwimifanekiso eqingqiweyo entle zezinambuzane ezenziwe ngezinto ezizodwa, uqalo. Le mifanekiso iqingqiweyo incinci kakhulu iyakwazi ukusikhuthaza ngokwaneleyo ukuba isishiye sonwabe bubuchule obukhulu bukaSaitoh.
Abanye imifanekiso yezinambuzane eneenkcukacha ezininzi kwaye nganye yazo iyakwazi ukusibonisa ukuba yintoni uhlabamanzi, umthandazi okanye ibhabhathane elifanayo. Ukuba umntu ugxila kwiinkcukacha, unokufumana isakhono esikhulu ekusebenziseni uqalo ukuze akwazi ukwenza yonke loo galari yemifanekiso esishiya singathethi.
Iinjongo zikaSaitoh kunye neqela lakhe zimele kanye ezo zinambuzane ngobungakanani bazo bendalo. Bavelisa imifanekiso eqingqwe ngobukhulu obulinganayo, nangona bevumela umlinganiso ukuba udlale ngakumbi ngobugcisa kunakwinyani nganye yamabhabhathane abasibonisa wona kwingqokelela yabo yezinambuzane.
Thatha imilinganiselo echanekileyo nganye yezilwanyana ezingenamqolo ezikhoyo Uyakwazi ukuzoba ngezinto ezinje ngoqalo, ukugqagqana ukuze sifumane ezinye zezona zinambuzane zaziwayo ngabo bonke.
Kufikelela nakwindawo sikwazi ukuziphambanisa ukufumana ezo nkcukacha ukuba basibuyisele imvakalelo yokuba sijamelene nomsebenzi omncinci wobugcisa, endaweni yento ephilayo yokwenene eya kuba nakho ukubhabha isothuse.
Unayo saitoh kwiwebhusayithi yakho, kwaye facebook wakho, ukuze uhlale umangalisiwe kukuqwalaselwa kweenkcukacha ukuba lo mculi uzisa emsebenzini wakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo yezinambuzane ezenziwe ngoqalo
Ukubeleka kwisibhedlele saseJapan sendawo, kunye nemenyu ephantse yafana nevenkile yokutyela
Le yipowusta entsha ye-Star Wars: IJedi yokugqibela kwaye icebisa ukuba kuya kubakho igazi